TTSweet: မုန့်လုံးရေပေါ် ...
Posted by T T Sweet at 11:38 AM
သက်ဝေ April 18, 2009 at 1:02 PM
ဒီညနေ လာရင် မှီသေးလားဟင်...
လုပ်ရမှာတော့ ပျင်းတယ်... သို့သော် စားတော့ စားချင်တယ်...
စားချင်တယ်... စားချင်တယ်... စားချင်ပါတယ်ကွယ်... (မမခင်ဦးမေ၏ လေသံအတိုင်း ထပ်တူ ကူးချသည်..)
T T Sweet April 18, 2009 at 1:08 PM
ရားဘာဒယ် ... ရားဘာဒယ် အစ်မရေ ... မနက်ဖြန်လာပါလား ... ၃နာရီ နောက်ပိုင်း ... TT ရယ် KKK တို့ရယ် လာမယ်တဲ့ ...
စုချစ် April 20, 2009 at 3:21 PM
TT နဲ့ KKK ဆိုတာ....
များကြတော့ မပြောဘူး...တိတ်တိတ်လေး လုပ်တယ်....
သက်ဝေ April 20, 2009 at 6:40 PM
TT ကို သိသော်လည်း KKK ကိုတော့ဖြင့် စဉ်းစား၍ မရပါ...
မနေ့က ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် ရွာတွေလည်နေလို့ မလာဖြစ်လိုက်ဖူး ဆွိရေ...
တကယ်တော့ အဲဒီနားကို ခဏ ခဏရောက်တယ်...
နောက်ဆိုရင် ဝင်လာခဲ့မယ်နော်... အာလူးပေးရတာပေါ့...
စုချစ် April 21, 2009 at 2:26 PM
KKK က အီးပီကွင်းလေ...
အမ ရေ... ဆု အ ဖြစ် ပြော် ရအုံး မယ်(ပြော် ကျလားြ လား အမှတ် မိဖူး..ကျောင်း မှာ ဗမာ စာ ဆို ရင် ဘိတ် ချီး)
အမ ရဲ့ အ ချိုးတိုင်း မုန် လုံးရေပေါ် လုပ် တယ်.. မုန့်သားကကောင်းတယ်.(ဆု တို့ စီ မှာ ကောက်ညှင်းမုန့်ကရှား တယ်.နေရာတိုင်း မှာ မရ ဖူး၊ တနေ့ကကံကောင်းချင်တော့ hypermarket တခုမှာရှာတွေ့တယ်) ဆုတယောက်တည်း လှလှ လေးတွေ၊ အလုံးသေးသေးလေးတွေ လုံး။ လုံး လိုက်အ၀တ်ထလျှော်လိုက်နဲ့၊ အလုံးတွေကတလုံးနဲ့တလုံးကပ်ထား မိတယ်.. ဒီအပြင် အချိန်ကလဲတော်တော်ကြာသွားတယ်... ပြုတ်တော့အကုန်ကတ်ကုန်ပြီး ပေါက်ပြဲကုန်တယ်..ဆုတော်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်..မုန်လုံးကြီးအရွယ်ဖြစ်ကုန်တယ်...:P စိတ်မရှေတော့လို့ ကြီး ကြီး လုံးလိုက်တာ... ဒီမှာ ထညက်ကမရှိဖူး.. ကြံသကာတော့ရှိတယ်.. အဲဒါနဲပဲလုပ်လိုက်တယ်. ပေါက် ကုန်တဲ့အလုံးတွေကအချိုရေ တွေထွက်လာတော့....နောက်ဆုံး အရေသောက် မုန့်လုံးရေပေါ်ပေါ့... ဟီးဟီး
နောက်တခေါက်ကြရင်ကောင်းကောင်းလေးလုတ်မယ်.. အမဆီကိုinternet ကနေပိုလိုက်မယ်.. :D
T T Sweet March 15, 2012 at 1:54 PM
မုန့်လုံးရေပေါ်က ချက်ချင်းလုံး ချက်ချင်းထည့်ရင်ပိုကောင်းမယ်။ ဆုဆုပြောမှ သတိရတယ်။ အိမ်မှာ အုန်းသီးတစ်လုံးဝယ်ထားတယ်။ ထန်းလျှက်၊ ကောက်ညှင်းမှုန့် အဆင်သင့်ပဲ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားမဲ့နေ့ ယူသွားဦးမယ်။
အိမ် က အမေ ကို ph ဆက် ပြော် တာ အမေ ဆို တာ ရယ် လိုက် တာ။ အမ ပြော် သလို ပဲ ချက်ချင်း လုံး ပြုတ် ရ တယ်တဲ့။။။ ဒီတခေါက် experiment မအောင် မြင်။။ တွတ်ပီ ဒီနေ့ကံ မကောင်း ပါ။။ :)
သားချို April 15, 2012 at 1:38 PM
မုန့်လုံးရေပေါ် စားချင်လို့ တီတီဆွိနည်းအတိုင်း လုပ်စားလိုက်တယ်.. အဆင်ပြေတယ်..